စံပြအစ္စလာမ် – Islam is Exemplar | Danya Wadi
Browsing: » Home »အစ္စလာမ်ဘာသာ»စံပြအစ္စလာမ် – Islam is Exemplar	Leaveacomment
စံပြအစ္စလာမ် – Islam is Exemplar	Posted by danyawadi on March 21, 2016 in အစ္စလာမ်ဘာသာ, General, Islamic	ပဲရစ်မြို့ရဲ့ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်တစ်ခုမှာ ကလေးငယ်တစ်ယောက်ဝင်လာပါတယ်။ ဗလီကျောင်းတော်ရဲ့ အိမာမ်ဆီ ကို သွားပြီး”ဆရာ ကျွန်တေ့ာအမေက စာသင်ဖို့ဒီကို လွတ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်စာသင်လို့ရနိုင်မလားဗျ??
အိမာမ်က ကလေးရဲ့ မိခင် ဘယ်မှာလဲ ??
မေးတဲ့အခါ ကလေးငယ်က ဗလီရှေ့မှာ ရပ်နေတဲ့အကြောင်းဖြေကြားလိုက်တယ်။
အိမာမ်က မိခင်ဖြစ်သူကိုတွေ့တဲ့အခါ သူမဟာ အစ္စလာမ်သာသနာဝင်မဟုတ်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် အဖြစ် သိလိုက်ရတယ်။
ဒီတော့ အိမာမ်ဟာ ဘာကြောင့် ကလေးငယ်ကို ဗလီမှာ စာသင် ခိုင်းရတာလဲ ??မေးမြန်းပါတယ်။
သူမက “ကျွန်မမှာ မွတ်စ်လင်မ် အိမ်နီးချင်းတစ်ဦးရှိပါတယ်။ သူမရဲ့သားသမီးတွေဟာ ကျောင်းကို မသွားခင်မှာ မိခင်ရဲ့ လက်ကို နမ်းရှုံ့ပြီး မိခင်နှင့်ကလေးတွေက အချင်းချင်းဆုတောင်းစကားဆိုပြီး မှ သွားလေ့ရှိတယ်။”
” ကလေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့မိခင်ကို ဘုရင်မ တစ်ပါးလို ရိုသေစွာဆက်ဆံကြပါတယ်။ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်မသားလေးကို သင်ပေးပါ။ ဒါဆို မွတ်စ်လင်မ်ကလေးတွေ သူတို့မိဘကို ဆက်ဆံသလို သားလေးလည်း ကျွန်မကို ရိုသေစွာ ဆက်ဆံ တတ်အောင်ပါ။” လို့ဖြေကြား လိုက်ပါတယ်။
မူရင်းပို့ မှ ဘာသာပြန်ကာပြန်လည်တင်ပြထားပါသည်။
Ei Thazin Pwint
Credit> Abdul Raheem Ronalhd
A NON MUSLIM MOTHER WISH :
A little child enteredaMasjid in Paris he went to the Imam and told him: ”Sir, my mom sent me here so that I can study in your school”
“But where is your mother?” the Imam asked the little boy“She is standing in front of the Masjid door” he replied ”She isanon Muslim”
The Imam went to her asking her why she, asanon Muslim woman, wants her little child to study in an Islamic school
She simply said:”my neighbour isaMuslim woman. Every time she takes her children to the school, they kiss her hands before going and they pray for each other. They treat her likeaqueen. Her family is always happy.
Please, teach my child in your school so that he treats me as Muslim children treat their parents””
← တူရကီနိုင်ငံ ပညာတော် သင် ဆု လျှောက် လွှာ ခေါ် ယူ ခြင်း	အရေအတွက်ထက် အရည်အချင်းကို ဦးစားပေးမည်ဟု သမ္မတ သစ် ဦးထင်ကျော် ပြော →